Shan sano oo xabsi Jarmal ah loogu helay shahaadooyin COVID-19 been abuur ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Shan sano oo xabsi Jarmal ah loogu helay shahaadooyin COVID-19 been abuur ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shan sano oo xabsi Jarmal ah loogu helay shahaadooyin COVID-19 been abuur ah.
Soo saarista iyo iibinta shahaadooyinka COVID-19 ee been abuurka ah waxay noqotay warshad suuq-madow oo soo koraysa gudaha Jarmalka.
Tirada COVID-19 ee Berlin ayaa gaartay heerkii ugu sareysay Khamiista la soo dhaafay, iyadoo 2,874 xaaladood oo cusub la soo sheegay maalintaas.
Baarlamaanka Jarmalka ayaa go'aan ka gaari doona xeerarka cusub ee ka hortagga COVID-19 Khamiistan.
Laga bilaabo Isniinta, haysashada mid ka mid ah tallaalka COVID-19 ama shahaado ka soo kabashada waa qasab in la soo galo maqaayadaha, shineemooyinka, tiyaatarada, matxafyada, qolaladaha, barkadaha dabaasha, jimicsiga, iyo sidoo kale timo-jaraha iyo goobaha qurxinta ee Berlin.
Bundestag (Baarlamaanka Jarmalka) ayaa lagu wadaa inuu go'aan ka gaaro xeerarka cusub ee adag ee ka-hortagga COVID-19 berrito, in kasta oo qabyo ah mar hore loo sii daayay warbaahinta.
Maaddaama mustaqbalka mustaqbalka ee isbahaysiga Jarmalka uu raadinayo inuu adkeeyo masiibada, dadka wax soo saara oo si ula kac ah u isticmaalaya shahaadooyinka tallaalka COVID-19 been abuur ah waxay dhawaan wajihi kartaa ilaa shan sano oo xabsi ah.
Natiijooyinka baaritaanka COVID-19 ee been abuurka ah iyo shahaadooyinka soo kabashada coronavirus waxay hoos imaan doonaan isla qeybta dambiga, iyadoo ciqaab la mid ah ay la kulmayaan kuwa been abuurka ah iyo kuwa haysta.
Wax kasta oo lagu salaynayey xeerarka cusub waxa diyaariyey xisbiga Sooshal dimuqraadiga, oo ay weheliyaan xisbiyada dimuqraadiga xorta ah iyo xisbiyada cagaaran. Saddexda xisbi ayaa hadda u socda wadahadallo isbahaysi, waxaana la filayaa inay soo dhisaan dawlad cusub oo Jarmal ah horaanta toddobaadka soo socda.
Soo saarista iyo iibinta shahaadooyinka COVID-19 ee been abuurka ah waxay noqotay warshad suuq-madow oo soo koraysa gudaha Jarmalka. Mid ka mid ah kiis noocaas ah oo uu soo sheegay Der Spiegel dabayaaqadii Oktoobar, nin been abuur ah oo ka shaqaynayey farmashiye ku yaal Munich iyo ninkii la socday ayaa soo saaray in ka badan 500. shahaadooyin dhijitaalka ah oo been abuur ah Mudo hal bil gudaheed ah, mid kasta oo la iibiyay ayaa lagu qiimeeyay €350.
Dhanka kale, Berlin Maamulka magaalada ayaa qorsheynaya inay sii kordhiyaan xannibaadaha caasimadda Jarmalka, halkaas oo, laga bilaabo Isniinta, qaadashada midkood tallaalka ama shahaado soo kabashada ay tahay in la galo maqaayadaha, shineemooyinka, tiyaatarada, matxafyada, galleries, barkadaha dabaasha, jimicsiga, iyo sidoo kale timo-jaraha iyo goobaha lagu qurxiyo.
Talaadada, Berlin Duqa magaalada Michael Müller ayaa xaqiijiyay in maamulka magaaladu ay rabaan "inay haystaan ​​qalab dheeri ah" si loo xakameeyo fiditaanka COVID-19.
Hase yeeshee, maayarka ayaa ka gaabsaday inuu tafaasiil ka bixiyo waxa ay noqon doonaan tallaabooyinkan cusub.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa qiyaaseysa in laga bilaabo usbuuca soo socda, marka lagu daro shuruudaha si loo helo shahaado tallaal ama soo kabasho si ay u galaan meelaha dadweynaha, dadka ku sugan goobaha sidoo kale waxay u baahan doonaan inay ku celceliyaan fogeynta bulshada oo ay xirtaan maaskaro, ama ay helaan natiijo xun oo dhowaan ah.
Dhammaan qawaaniinta cusub ee magaalada iyo xaddidaadda waxay yimaadaan ka dib markii lambarrada COVID-19 ay soo galaan Berlin ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyey Khamiistii hore, iyadoo 2,874 xaaladood oo caabuqa coronavirus ah la soo sheegay maalintaas.
Nofeembar 18, 2021 at 04: 56
Soo saarista iyo iibinta shahaadooyinka COVID-19 ee been abuurka ah waxay noqotay warshad suuq-madow oo soo koraysa gudaha Jarmalka. Booliiska Jarmalka ayaa sameeyay koox gaar ah oo la dagaalanta suuqa madow ee sii kordhaya ee shahaadooyinka tallaalka been abuurka ah. Taasi waa sida ay sheegtay Europol, oo ah hay'adda booliiska Midowga Yurub.